🥇 ▷ Wicitaanka Waaqiciga: Dagaalkii Casriga ahaa wuxuu ku socdaa Dynamic 4K On PS4 Pro, Dynamic 1080p On PS4 ✅
Wicitaanka Waaqiciga: Dagaalkii Casriga ahaa wuxuu ku socdaa Dynamic 4K On PS4 Pro, Dynamic 1080p On PS4
Wicitaanka Waajibaadka: Dagaalkii Casriga ahaa ayaa dib u helay dib-u-dhis iyada oo ciyaar cusub oo ay gacanta ku hayso ‘Infinity Ward’, kaas oo dhammaanaya sannadkan. Halkan waxaa ah faahfaahinta ku saabsan qaraarka PS4 iyo PS4 Pro iyo heerka xaddiga.
Wicitaanka Waajibaadka: Dagaalkii Casriga ahaa waxa uu siinayaa Alfa xirmo milkiileyaasha PS Plus dhawaanahan. Tani waxay ku salaysnayd nidaamka cusub ee xaddidan ee 2 vs. 2 Gunfight mode. Dhismaha Alfa ee ciyaarta wuxuu bixiyaa fahan ku saabsan xallinta iyo heerka qaab cayaareedka.
Kanaalka YouTube VGTech labadoodaba si qoto dheer ayuu u faahfaahiyey isagoo bixinaya tafaasiil waxa laga filayo iyaga xagga labada meelood ee kala duwan. Ciyaarta waxay ku socotaa 60 FPS labada PS4 caadiga ah iyo kor u qaadistiisa Pro.
PS4 waxay isticmaashaa xallin firfircoon oo leh qaraarka ugu hooseeya ee waddaniga ah ee la helay qiyaastii waa 960 × 1080 iyo qaraarka ugu sareeya ee hooyo waxaa la helay 1920 × 1080. On PS4 nooc dib-u-dhis ku-meel-gaar ah ayaa la isticmaalaa oo kordhin kara tirada pixel illaa 1920 × 1080 marka xallinta waddanku ka hooseyso shaxdan.
PS4 Pro waxay isticmaashaa xallin firfircoon oo leh qaraarka ugu hooseeya ee waddaniga ah oo la helay qiyaastii 1152 × 1800 iyo qaraarka ugu sareeya ee waddanku leeyahay wuxuu ahaa 1920 × 2160. On PS4 Pro nooc dib-u-dhis ku-meel-gaar ah ayaa la isticmaalaa kaas oo kordhin kara xallinta qaraarka ka sarreeya xallinta waddaniga lagu siiyay.
Xalka ugu badan ee lagu gaari karo farsamadaan dib-u-dhiska ku meel gaarka ah ee PS4 Pro waxay u muuqataa inay tahay 1920 × 2160. PS4 Pro wuxuu u muuqdaa mid hoos udhaca ka ah qaraarkan marka la soo saarayo 1080p.
Wicitaanka Waajibaadka: Dagaalkii Casriga ahaa wuxuu maqnaan doonaa Oktoobar 25, 2019, ee loogu talagalay PS4, Xbox One, iyo PC.